မြင်ရ၊ ကြားရ မန္တလေးက ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြင်ရ၊ ကြားရ မန္တလေးက ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ
မြင်ရ၊ ကြားရ မန္တလေးက ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ
Posted by Diamond Key on Feb 16, 2012 in Myanma News, News | 35 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တစ်ရက် (၁၀-၀၂-၂၀၁၂) က မန္တလေးမြို့ လမ်းတစ်နေရာမှာ ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းဘေးက ယာဉ်ရပ်နားရာ နေရာကနေ ထွက်လာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို လမ်းအတိုင်း မောင်းလာတဲ့ Light Track ကားတစ်စီးက ဝင်တိုက်မိတာပါ။ အတိုက်ခံရတဲ့ ဆိုင်ကယ်က ကျိုးပဲ့ပျက်စီးကာ စီးလာတဲ့ မိန်းကလေးက ခြေဖမိုးက အရေပြားလံကာ ခြေထောက်က သွေးသံ တရဲရဲ ဖြစ်နေပေမယ့် တိုက်တဲ့ကား ယာဉ်မောင်းသူက ဆေးရုံဆေးခန်း လိုက်ပို့ပေးဖို့ နေနေသာသာ “တိုင်ချင်ရာတိုင်” ဆိုပြီး မောင်းထွက်သွားလို့ ဘေးက လူတွေက ကားနံပါတ် လိုက်မှတ်ပေးကာ တိုက်သွားတဲ့ ကားနံပါတ်ကို မှတ်ထားလိုက် နိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒါ သွေးသံတရဲရဲ ဖြစ်နေတဲ့ လူနာကို ဆေးရုံဝိုင်းပို့ပေးကြပြီး ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ ကို ဖုံးဆက်တိုင်တော့ တပ်ကြပ်အဆင့်ရှိတဲ့ ယာဉ်ထိန်းတစ်ယောက် ကားတစ်စီးနဲ့ အခင်းဖြစ်နေရာကို ဦးဆောင် ရောက်လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို နဲနဲ မေးမြန်း စစ်ချက်ယူကာ အတိုက်ခံရတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ကားပေါ်တင်ယူသွားကာ သွားပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ တိုက်မောင်းထွက်သွားတဲ့ သူကို မြင်တွေ့ကာ ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူက ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်သွားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတော့ ရဲကို သတင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့လိုက်၇သူတွေကတော့ “တိုင်ချင်ရာတိုင်” ဆိုနိုင်မှတော့ အပိုင်တော့ ရှိမှာပေါ့လေတဲ့။ နောက်တစ်နေ့မှာ တိုက်သွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းသူရဲ့ မိသားစုက အတိုက်ခံရတဲ့ မိသားစု ဆီဆက်သွယ်လာပြီး ဘာလုပ်ပေးရမလဲတဲ့လေ။ တိုက်တုန်းကလည်း သွေးသံတရဲရဲ လူနာကို ဒီအတိုင်းထားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ဆေးရုံပေါ်က လူနာကို လုပ်ပေးနိုင်စရာ အများကြီး ရှိနေပေမဲ့၊ မိသားစုဆီလာပြီး ဘာလုပ်ပေးရမလဲ မေးလာတော့ မိသားစုနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေက လူနာအတွက် လုပ်စရာ ရှိတာလည်း လုပ်ပြီးပါပြီ။ ကျန်တာတော့ ဥပဒေ အတိုင်းပဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုက်တော့ ဒီလို ရုံးဘာညာမရောက်အောင် ညှိချင်တာပါတဲ့။ အဲဒါ ဒီဖက်က ရဲလည်း တိုင်ထားပြီးပါပြီ။ တိုက်ခံရတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုလည်း ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့က အမှုအတွက် ယူသွားပါပြီ ပြောလိုက်တော့ …. ရတယ်၊ လောလောဆယ်မှာ ရဲကို တားထားတယ်တဲ့။ (သြော် …. ရဲလုပ်ငန်းကိုတောင် တားနိုင်တဲ့ စွမ်းသူတွေလေ။ ရဲက တိုက်တဲ့သူကော၊ တိုက်မောင်းသွားတဲ့ ကားကိုရော မဖမ်းပဲ တိုက်ခံရတဲ့ လူနာရဲ့ ဆိုင်ကယ်ပဲ ရဲစခန်းမှာ ထားထားတာဗျ။ ) အဲဒါနဲ့ လူနာဖက်က ဒါဆိုရင်တော့ ရဲစခန်းရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို အသစ်တစ်စီးပြန်ပေးရင်၊ လူနာလက်ရှိကုန်ကျထားတာလေးတွေ ပြန်ရရင်တော့ ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်ရော မြန်မာ့ တပ်မတော်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက် (မန္တလေးနန်းတွင်းက တပ်တစ်ခုက) ချက်ချင်းရောက်လာပါလေရောဗျာ။ ဒီဗိုလ်ကြီးခဗျာ ရုံးချိန်ကြီးမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ တပ်မတော်အလုပ်တွေပဲ ထားခဲ့တာလား။ ခွင့်နဲ့ပဲ လိုက်လာတာလားမသိပေမယ့် IPaid ကြီးမှာ ယာဉ်ထိမ်းဆီက ယူလာတယ်ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထည့်လာပြပြီး ဘယ်သူမှားလဲ လာလုပ်ပါတယ်။ လူနာဖက်က သူတွေက ဒါကတော့ ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ကပဲ သိမှာမို့ အမှားအမှန်က ရဲစခန်းကျမှ သိရမှာပါ ပြောလိုက်ရပါတယ်။ လူနာရှင်ဖက်က ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဆီ အမှုကိစ္စ လိုက်မေးတော့ အမှုမဖွင့်သေးပါတဲ့ဗျာ။ တိုက်သွားတဲ့ ကားကလည်း အပြင်မှာ အေးအေးဆေးဆေး မောင်းလျှက်ပါပဲ။ ဒါနဲ့ ဒီဖက်က ရဲကို အမှုဖွင့်ပေးပါလို့ ပြောမှာ ရဲက အမှုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအမှု ဘယ်လိုဖြစ်လာလေမလဲ ဆိုတာကတော့ တရားရုံးရောက်မှ သိရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ – – တိုက်မိပြီး သွေးသံတွေနဲ့ လူနာကို ထားကာ မောင်းထွက်သွားတာရယ် – ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လို့ ရဲကိုအကြောင်းကြားလို့ ရဲက လာစစ်ကာ အတိုက်ခံရတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုတောင် ယူသွားပေမယ့် တိုက်သွားတဲ့ ကားကလည်း အပြင်မှာ အေးအေးဆေးဆေး မောင်းလျှက်ရှိနေတာရယ်၊ – ရဲက တိုက်တဲ့သ၊ူ တိုက်တဲ့ကား တွေ့နေသိနေ၊ သတင်းပေးတာတောင် အမှုမဖွင့်တာရယ် – ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုကို တပ်မတော်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်က အမှုကိုကျေအေးအောင် ပါဝင် လိုက်လုပ်နေတာရယ် ………………… က သြော် ……………………………. ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးမှာ တစ်ကယ်ဖြစ်နေလေရဲ့ဗျာ။
နောင်တစ်ခါဆို ကမ်းတက်လိမ့်မယ် ဗျို့။
ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ရှိနေသူတွေ မှန်သမျှ
မီးဒုတ် မီးဒုတ် ရှို့ ရှို့။
အေးအေးဆေးဆေး နေလိုကြတဲ့ မြန်မာတွေကတော့ သမိုင်းပေး အသိတွေအရ၊ ရုံးရောက် စခန်းရောက် မဖြစ်လိုကြပါဘူးဗျာ။ ငွေကြေး ဓနအင်အားနည်းတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့လေ။
အမှန်တရားလည်း လိုလား၊ ရုံးပြင်ကနားလည်း မသွားချင်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှလည်း မရှိနေစေချင်ကြပါ။
ဥပဒေရဲ့ အဆုံးအဖြတ် – ဒီအဖြေက ဘာလည်းဆိုတာ ဆက်လက် စုံစမ်းနေပါတယ်။ သိရရင် ဒီပို့စ်မှာ အဖြေရေးပြပေးပါမယ်။
အဲဒါက ကြီးသောအမူ့ငယ်စေ ငယ်သောအမူ့ပပျောက်စေဆိုတာကို အကောင်အထည်ဖော်တာဖြစ်မှာပေါ့ နော်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ကျားကိုလည်း ကြောက်ရ ကျားချီးကိုလည်းလန့်ရတဲ့ ဘ၀ပါဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံက စောက်သုံးမကျတဲ့ဗိုလ်။ background အားကိုးနဲ့လုပ်စားနေသူများ -ီးဘဲ။
ဖတ်လို့ မကျေနပ်ဘူးလား။ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါက ကိုးကန့်က။
ညီလေးရေ။ အခု သရီးစတားကြီး ကန့်လန့် ကန့်လန့် ပါနေတာက တိုက်တဲ့ကားမောင်းသူက သူညီအရင်းတဲ့ဗျာ။
သူကတော့ မိသားစု ကိစ္စမို့ ကိုပေါက်ကြီး ပြောသလို ကြီးသောအမူ့ငယ်စေ ငယ်သောအမူ့ပပျောက်စေဆိုတာကို အကောင်အထည်ဖော်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ နော်။
ဒီဖက်ခေတ်မှာတော့ မဟုတ်တာ သိပ်မလုပ်လောက်ပါဘူးလေ။
ဒါပေမယ့် ရဲဆီက ကားကို သူ့ စတားအရှိန်နဲ့ ထုတ်သွားတယ်လို့တော့ သိရတယ်။
အပွင့်တွေ၊ အခက်တွေက အခုထိအသက်ပါနေတုန်းပဲနော်….
၀ိတ်နဲ့ ဖိတယ်လို့ ပြောရမယ်..
ဥပဒေအထက်မှာ သူတို့တွေ ရှိနေသရွှေ့တော့……
ဂလောက်တောင် လူမဆန်ပြီး မာန်တက်နေတဲ့ကောင်မျိုးတွေ ဒီလိုရေး ဒီလိုဖော်ပြမှ မှတ်မှာ..
အားပေးတယ်ဗျို့.. ဒါနဲ့ အစိမ်းရောင်ဝတ်တွေကလည်း ဒင်းတို့နေ့တွေ ကုန်သွားပီဆိုတာ မသိလေရော့သလား..
ကတောက် ..အနားမှာ ရှိချင်စမ်းတယ်ဗျာ. ဒီလိုကောင်မျိုးများ မိစိန်ပေါက်နဲ့ပေးတွေ့လိုက်မယ်.
ပြီးတော့ ဆရာသော့များအဲဒီ မိသားစုနဲ့ နီးစပ်ရင်ပြောလိုက်ပါ.
မတရားမှုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာဒင်းတို့သိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ လို့..
တော်တော်မိုက်ရိုင်းပြီး လူမဆန်တဲ့ ငလမသ တွေ
တစ်ခုခု ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လို့ဘေးက ဆိုက်ကားသမားတွေ ၀ိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းတော့ မလုပ်ပါနဲ့ မကောင်းပါဘူး
ရိုက်ပြန်ရင်လဲ ဆိုက်ကားသမားတွေ လွန်ရာကျဦးမယ်
မင်းတို့ လို တာဝန်မဲ့ ငလမသ တွေ ကြောင့် မနေနိုင်တဲ့လူတွေက ၀ိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းတာ
ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့် ကြားက တာဝန်သိလူတွေပါ ရောရောင်ပြီး အဖဲ့ခံရတာကွ
ဒီလို မတရားတဲ့ကိစ္စတွေကို ရှင်ရှင်းမှာလား ကျုပ်ရှင်းရမှာလား
ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာရှိနေသူတွေ ဘယ်လောက်တောင်များလဲ သိချင်သား။ Blacklist ပြပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးဖို့ vote လုပ်ချင်လို့။ ;)
ခွေးမျိူးတွေဆိုတော့ ခွေးကျင့်ခွေးကြံ ပဲ ကြံပီး ခွေးဇာတ်ပဲခင်းကြမှာပါ…………..
ခွေးလသက်မဂ ခွေးကထ ;)
Char too အလှူ ဒါ့ပုံတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါထားတယ်နော် … ဟဲဟဲ .. အရင်ဆုံးခေါ်လျှင် …. အရင်ဆုံး အတွေ့ကြုံလေး ရေးပေးနော် .. ဟိဟိ
တိုက်လည်း ခံရသေးတယ် ….. ဘာအရေးယူစစ်ဆေးမှုမှ မလုပ်သေးဘူးဆိုတာကတော့ .. မဖြစ်သင့်ပါဘူး .. နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုတောင်ရောက်နေပြီပဲ …. ငွေရမှ လုပ်တဲ့ အကျင့်တွေ ပြင်သင့်ပြီ … ။
စံနမူနာအနေနဲ့ လုပ်ပြထားမှ … နောက်လူတွေ ဆင်ခြင်လိမ့်မယ် … ။
မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေက အစ ပြင်မှ ရမယ် … ။
ဦးစိန်သော့ရေ … သိချင်ပါသေးတယ် …နောက်ထပ် ဘယ်လိုများ အမှုပြီးသွားမလဲလို့ … ။
eton ရေ။ ဒီအမှု က ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးက သတင်းသမား တစ်ဦးရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့လည်း ပတ်သက်နေလေတော့ သတင်းသမားတွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ အမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီသတင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်စဉ်တွေကို သိရသလောက် ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ ဒီပိုစ့်မှာ Update လုပ်ပေးပါ့မယ်။ FB တွေမှာလည်း ဖေါ်ပြနေကြပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအပွင့်တွေ အခက်တွေက အခုထိ လုပ်စားနေကြတုန်းပဲလား အခုလိုဝိတ်နဲ့ဖိတာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲ..
ဒါပေမယ့် မန္တလေးကသူတွေ (ကျွန်တော်လဲမန္တလေးသားစစ်စစ် ပါပဲ) ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းကိုတော့ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ယောက်လောက်က မလိုက်နာကြဘူးဗျ.. နောက်ပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားနဲ့ ငြိရင်လဲ ယဉ်ကြီးနဲ့ယဉ်သေး ဆိုပြီးလုပ်ကြသေးတယ်… ကျွန်တော့်သဘောကတော့ ယဉ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ယဉ်သေးပဲဖြစ်ဖြစ် မှားတဲ့သူခံ.. အဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်.. အခုတော့မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့အညာကလူတွေ (မုံရွာ မိတ္ထီလာ ပုဂံ အကုန်ပါတယ်) အတွေးထဲမှာ ကားနဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်ရင် ကားသမားလျော်ပဲ.. ဒါဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တွေက စည်းကမ်းရှိလားဆိုတော့လည်း တစ်စက်ကလေးမှကို စည်းကမ်းမရှိဘူး… ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက် လမ်းပြောင်းပြန်မောင်း နီနေရင်လဲ ဇွတ်ဖြတ်.. အဝိုင်းပတ်မှာ အဝိုင်းပတ်နေတဲ့ယဉ်ကို ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာလဲမသိ.. မီးပွိုင့်တွေကလဲအလုပ်မလုပ်… ရဲကလဲ လုပ်စား… ဘယ်တော့များမှ ဒါတွေပျောက်မှာပါလိမ့်…
အင်း ဒုက္ခ ဒုက္ခ ကျူပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေလဲ ဟိုလူ့ကြောက်ရ ဒီလူ့ကြောက်ရနဲ့ .. တော်တော်ဆိုးတဲ့ ခေတ်ကြီးပါလားနော်။ မတရားဥပဒေသာ မရှိဘူးဆိုရင် အဲလိုကောင်မျိုးတွေကို တိုက်ကားဝယ်ပြီး လိုက်ရှာတိုက်သတ်ပါတယ်။ တော်တော်ကိုလူမဆန်လွန်းလို့ပါ။ သူ့တို့သားသမီးတွေ ဆွေမျိုးတွေကို အဲလိုလုပ်သွားရင် အဲဒီခွေးမသားတွေ ဘယ်လောက်တောင် ဒေါသထွက်လိုက်မလဲ ။ ဖြစ်နိူင်ရင် တခါလောက်တော့ အဲလိုမျိုး သူတို့တွေ ခံစားရတာကိုကြည့်ခြင်လိုက်တာဗျာ။ သိပ်တော့မကြာတော့ဘူးထင်ပါတယ် …အဲဒီနွားတွေ ခေတ်ကုန်ဖို့။
တ၀န်းပူမျဉ်းစောင်း ကြေးနျစ်သောင်းတဲ့ သေတောင် ၆သုံးမကျဘူးတဲ့…။ ခုမှ သုံးလိုင်းဆိုတော့ အဲအကောင်လည်း ကြေးနှစ်သောင်းကျော်ပဲနေမှာ….
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်တော့ မသိလို့ မပြောတတ်ဘူး..
ယာဉ်ကြီး နဲ့ ယာဉ်ငယ် မှာ ဘယ်သူမှားမှား မှန်မှန် ယာဉ်ကြီးကိုသာအပြစ်ယူတဲ့…
မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမှာ ၃ပွင့်လောက်ကောင်က ဒီလောက်ထိပါဝါပြနိင်တာလဲ ပျင်းစရာကောင်းတယ်
ရဲတွေရဲ့စောက်သုံးမကျ မူက ပိုလို့ပေါ်လွင်စေတယ်…
အရှင်းလေးပဲ မှားတဲ့ သူ က ခံ လျော်ပေါ့ ဘယ်နဲ့မြန်မာ့ တပ်မတော်က ဆိတ်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက ကပါလာတာလဲ ဗမာတွေ အကျင့်တွေ သိပ်ပျက်နေပြီ နေရာတိုင်း ၀ိတ်သုံးချင်နေကြတယ်
အုပဓေ ရဲ့ အထက်မှာ
It should sue all related person with correspondent law and inform to Pythu Hlutaw’s human right committee.
If that is not enough, inform to Human right commission.
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လူတွေ ဆိုင်ကယ် မစီးရဘူးလို့
မင်္ဂလာဒုံဆိုတာ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ မပါလို့လား
ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ကယ်စီးနေတာ လူတွေမဟုတ်လို့လား…း(
ကဲ..ရဲတွေ၊ရှေ့နေတွေ၊တရားသူကြီးတွေ ကြားကြတယ်နော်။ အမှုကိုအမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ တရားလိုများဘက်ကလည်း စိတ်ဓါတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ထားပါ။ အစော်ကားမခံပါနဲ့။ အဆုံးထိသာရောက်အောင်သွားပါတော့….
မထူးဆန်းပါဘူးဗျာ…………မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲပဲ…………….ဒါများ သေးသေးလေးရှိသေးတယ်……………………
အံ မယ် ….
ဒါထက်ပိုကြီးရင်…ဒီ့ထက် ပိုလုပ်စားလို့ ကောင်းသေး….း)
တပ်မတော်က သူတောင်းစားတွေကို လွှတ်တော့မပေးနဲ့ ဗျာ။ရသလောက်တော့ ဆော်ရမှာဘဲ။
ဥပဒေတိုင်းတော့ မရရင်၊လူချင်းသာရှင်းဖို့ ကျတော့မယ်။ခက်တယ်ဗျ ဒီစစ်ခွေးတွေ အကြောင်း
ကြားရင် သွားသတိရမိတယ်။၂၀၀၆ ခုနှစ်မကွေးမှာကျနော်ကျောင်းတက်နေတုန်းကလဲ
မင်းဘူးတပ်က တပ်ကြပ်အဆင့်တစ်ကောင် ဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးထွက်ပြေးလို့ လက်သီးစွမ်းတွေပြ၊
သူနာ၊ကိုယ်နာနဲ့ ဖမ်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ကိုဘလက်ချောပြောသလို မီးတုတ်တော့ရှို့ ရမယ်။
လုပ်ချင်သာလုပ်နေကြတုန်းပါပဲ အကျင့်တွေကမပြောက်သေးဘူးလေဗျာ အရိုးစွဲနေပြီ
ဟုတ်တယ် ယဉ်ထိန်းရဲက အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင် အလုပ်ဘဲနဲ့ ။လူမှုရေးအရညှိကြပါဆိုတာကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်အမကို ကားအတိုက်ခံရတုန်းက ကျွန်တော်အမမှာ တိုက်တဲ့ကားအောက်ကနေကို ဆွဲထုတ်ယူရတာ သေပြီကိုထင်တာ။ အဲ့ဒါနဲ့ ယဉ်ထိန်းရုံးကို တိုင်ပြီး အမှုဖွင့်ဖို့လုပ်တော့ တာဝန်ကျအရာရှိက ခင်ဗျားတို့ကို အမှုဖွင့်ပေးလို့မရဘူး။ တစ်ဖက်က တိုက်သွားတဲ့ ကားပိုင်ရှင်က စက်မှု(၁ )၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းရဲ့ တူမ ( ၁ )၀မ်းကွဲဆိုလား ( ၂ ) ၀မ်းကွဲဆိုလားပဲ ၊ ၀န်ကြီးက ဖုန်းဆက်ထားတယ်တဲ့ အမှုမဖွင့်ရဘူးလို့တဲ့ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ အစဉ်ပြေအောင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားပြီး လူမှုရေးအရ ညှိကြပါတဲ့။ ကားမောင်းတဲ့ကောင်ကလည်း လိုင်စဉ်မရှိဘူး။ ခြေထောက်တစ်ဘက်ကမသန်ဘူး။ တကယ်တမ်းက သူက ကားစပယ်ယာ လိုင်စင်မရှိဘဲတတ်မောင်းတာ။ သူတို့ကလည်း အားကိုးရှိတော့ လျော်ကြေးတွေဘာတွေ သိပ်အများကြီးမပေးချင်ဘူးပေါ့ဗျား. . . ဒါနဲ့ လူတစ်ယောက်လုံး ( ၁ ) လလောက်ဆေးရုံကြီးမှာတတ်ပြီးကုရတယ်။ မျက်နှာတစ်ခြမ်းလည်း စုတ်ပျက်သွားတာ နဂိုအတိုင်း ပြန်မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်အမ က အစက အတော်လှတယ်ဗျ လက်ဖက်ကြော်ငြာတွေ ထိုးမုန့်ကြော်ငြာတွေတောင် ရိုက်ဖူးတယ် ( ဓါတ်ပုံ )။ အခုတော့ဗျာ ရတဲ့ ဂရုဏာကြေးပေါ့ဗျာ ( 1 )သိန်းလား ပဲရလိုက်တယ်။ နိုင်ငံသားကောင်းများ တာဝန်ကြေပုံပြောပါတယ်။